Kuni Oduu Aagaati: ” Magaalaan Duukam qonnaan bultootaa.. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKuni Oduu Aagaati: ” Magaalaan Duukam qonnaan bultootaa..
Kuni Oduu Aagaati: ” Magaalaan Duukam qonnaan bultootaa..
Kuni Oduu Aagaati: ” Magaalaan Duukam qonnaan bultootaa fi maatii isaanii misooman kaafaman 860 oliif lafa mana jireenyaa itti ijaarratan laate.
Qonnaan bultoonni sababii invastimantiitin kaafaman 227 tokkoon tokkoon isaanii lafa mana jireenyaa itti ijaarratan kaaree meetira 500 argataniiru. Ilmaan qonnaan bulaa 635 fi barsiistota 36f ammoo lafti kaaree meetirri 140 kennameefira.
Dhimmi qonnaan bultoota lafa qonnaa isaanitirraa kaafamanii fi komii kaasaa turanii furmaata kan argatu ta’uu hogganaan Biiroo Bulchiinsa Lafaa Oromiyaa Dooktar Milkeessaa Miidhagaan himaniiru. Weerarri lafaa babal’ataa akka dhufe kan himan Dooktar Milkeessaan, qonnaan bultoonni lafa mana jireenyaa argatan lafa laatameef sirnaan akka qabatan dhaamaniiru.
Hogganaan Eejansii Deebisanii Dhaabuu Naannoo Oromiyaa obbo Dachaasaa Beekaan misoomni kamuu qonnaan bulaa jiddugaleessa godhachuudhan hojjetamuu qaba jedhaniiru.
#Finfinnee: “Gochii OPDO Hiboo deebii hin qabne?
“OPDOn lafa ummata Oromoo qonnaan bultoota dorsisuun gurguruu itti fufte jirti. Aanaa Sabbata Ganda baadiyaa Haroo Jilaa fi Fulaasoo ti Magaala Sabbata fi Tafki giddutti argamu Lafti isin irraa fudhatamuuf jeechuun alagaan maallaqa xiqaan lafa qonnaan bultoota akka bitu godhuun sana booda waajjitri invastimanti Godina addaa seeran ala abbaa qabeenyaaf lafa Oromoo gurguraa jira. Gochi badii kuni naannoo FF kallatti hundaan raawwatamaa jira.OPDOn yoo gamanaan suphan gamasiin harcaati. Ammas saamichi bifa kanaan toftaa jijjiruun raawwatamu kamu fudhatama akka hin qabne beekamu qaba.”
OMN:Oduu Galgalaa (Eebla 30,2019)
OMN:Qophii Xiyyeeffannaa(Ebla 30, 2019)
Aangoliin Oromiyaa aangoolin Somaale qunnaman. Eessatti?